Kitapo, poketra, sakaosy - Tsarabika
> Vehivavy>Kitapo, poketra, sakaosy
Misy entana 18 isa.
Kitapo fitondra andavan’andro, ho an’ny ankizivavy. Tsy mandreraka ary tsy manano sarotra ny mitondra azy satria tonga dia afaka atao ao an-damosina fotsiny dia vita. Miloko “rose” izy ity, ary misy zavatra miendrika kiran-trondro ny vatany rehetra.
Kitapo afaka babena na "sac à dos", mba miala amin'ny mahazatra. Ireto kitapo ireto dia vita avy amin'ny lamba fa tsy "nylon". Tsotsotra kely mahafinaritra, tsy dia be filirony, fa misy ny zavatra tena ilaina rehetra.
Poketra kely, hitondrana kojakoja madinika ho an'ny vehivavy. Fitondra rehefa fety aman-danonana. Afaka mifanaraka tsara amin'ny lokon'akanjo rehetra. Miloko "doré" na "argenté"
Longchamp sac dame
Karazana poketra hafa indray "long champ", afaka aforitra kely tsy mibahan-toerana, ary afaka velarina ihany koa. Ngeza sy mahazaka entana tsara, tsy mora rovitra sy mora tapaka ny tahony.
mini pochette rouge
Poketra ho an'ny vehivavy azo ho entina isan'andro. Tsara ny endriny, ary manintona tokoa, satria miavaka amin'ny rehetra. Kelikely izy ity, ary mety ho an'ireo vehivavy tia poketra kely.
Kitapo kely fitondrana sakafo, mitana hafanana. Azo entina mitsangatsangana, na any ampianarana, any ammpiasana sns...
Poketra mihaja am-behivavy. Poketra avo lenta azo entina amin'ny lanonana, fotoana samihafa...
Kitapo 2 azo anangonana entana sns. Azo entina mitsangatsangana, azo ampiriminana ireo entana manakorontana an-tokatrano sns..
Kitapo mora avalona, sy mora entina iantsenana. Modely kelikely. Afaka avelatra sy akombona.